Aqoonkaab Xanuunada kilyaha- Nephrology | Aqoonkaab
Marka ay kelyahaagu howl gabaan, waxaa loo baahan yahay dawo lagu bedelo shaqadi ay kelyahaaga u qaban jireen jidhkaaga. Waxaa jira laba nooc oo dawo ah oo lagu daweeyo howl gabka keliyaha, waxey kala yihiin kelyo maydhis iyo kelli bedelid. In kastoo bedelidda ay keento xurnimo iyo tayo sare oo nolosha ah marka lala barbardhigo kilyo maydhis.
Waa maxay kelli bedelid?
Marka laguu bedelo kelyaha, waxaa gudaha jidhkaaga lagu rakibaa kelli caafimaad qabta si ay u qabato shaqadii ay kelyahaaga kuu qaban jireen. Faa’idada kale ay leedahay ayaa ah inaad u noolaan kartid sidaadii hore oo kale oo aan cunnadaada xad loo yeeleynin, in kastoo ay muhiim tahay inaad marwalba joogteysid cunno wanaagsan. Waxaa wanaagsanaanaya tamartaada iyo caafimaadkaaga.
Yaa loo bedelaa kellida?
Waxaa loo bedelaa bukaanada yaryar iyo kuwa da’da ah ee la nool xanuunada kelyaha, arinta ugu horeysa ayaa ah in qofku uu yahay qof sidiisa kale u caafimaad qaba oo xamili kara qalliinka lagu sameynaayo. Qof kasta waxaa lagu sameeyaa qiimeyn dhan caafimaad iyo dhan maskaxi ah inta aan lagu sameyn qalliinka lagu bedelo kellida. Dadka da’da ah ee lanool xanuunada sonkoroowga ayaa sidoo kale loo sameyn karaa qalliinka lagu bedelo kelyaha.
Waxaa loo bedelaa kelyaha qofka ay shaqada kelyihiisu ka yar yihiin 15ML/Minute cabirka GFR (Gromeruli Filtration Rate)
Previous PostCalool Xanuun Next PostSida loo maareeyo raaxa la’aanta ka dhalata laab jeexa